Heart Museum: အကြည့်
Posted by Heartmuseum at 12:32 PM
ကောင်းတယ် ... လေးနက်တဲ့ တိုက်ရိုက် စူးနစ် သက်ဆိုင်တဲ့ အကြည့်တွေ ရပါစေ :)
သဘောကျတဲ့အကြည့် အောချတဲ့အကြည့်နဲ့ ဖတ်လိုက်မိပါတယ်။ စကားလုံးကြွယ်ဝပါပေတယ်။ အဓိပ္ပါယ်ကိုလည်း နှစ်သက်မိပါတယ်။း)
ဇီးကွက်ရဲ့ အကြည့် ၊ ကျီးကန်းအကြည့် ကြေကွဲတဲ့ အကြည့် မောပန်းတဲ့အကြည့် ကြည့်ချင်တာကြည့် ဟားဟား ၀င်ပွားကြည့်တာ ဘာမှတော့မဟုတ်ဘူးးးးးးးးးးးးး။
လာကြည့်သွားပါတယ်.. အကြည့်တွေကိုတော့ မီ မခွဲတတ်သေးဘူး.. ;)
-- ဘယ်သူတွေက ဘယ်အကြည့်နဲ့ပဲကြည့်ကြည့်
When did you understand this? I didn't know, I didn't realize it!
Your expression of thought isamessage to open my eyes :)
ငတ်ကြီးကျတဲ့ အကြည့်နဲ့ မမေကိုတော့
$100,$200 တောင်းတာ အဒူမှလဲပေးဝူးဟ..........
ငါလဲအဲဒီထုံးနှလုံးမူပြီး နေ... နေတာဟ
ဟီး... နာတော့ ယောကျာင်္းချင်းချင်း ခပ်ပါးပါးပဲ ...ဟီး
ဂလိုဆိုရင်တော့ ဇရက်မင်းစည်းစိမ် အကြည့်နဲ့ ကြည့်ပေးမယ် အဆင်ပြေရင် Dunhill တစ်ဘူးလောက်ပါ ဆွဲထားလိုက်...။ :P
"အတွေ့" ဇာတ်လမ်း နာမည်ကြီးသလို "အကြည့်" ကဗျာ နာမည်ကြီးလာပြီ :)
မှိုရတဲ့အကြည့် နဲ့ ဂြိုလ်ထတဲ့အကြည့် ကျန်သေးသပ :P
ဘာတဲ့...မှိုရတဲ့အကြည့် နဲ့ ဂြိုလ်ထတဲ့အကြည့်
တောင်ကြည့် မြောက်ကြည့်.. ကျီးကြည့်ကြောင်ကြည့်နဲ့ ကြည့်သွားတယ်..ကိုအညတရရေ..။